Subject: သို့....မနက်ဖြန် 19th May 2009, 6:13 pm
online မှာတော့ အမြဲတွေ့တယ်။ online မှာရည်စားစကားပြောတယ်။ အပြင်မှာလဲပြောတယ်။ ချစ်တယ်တဲ့ ။ သူ့အချစ်က TRUE LOVE တဲ့။
ဗေဒင်မေးကြည့်တာပါ။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့ သိပ်မရင်နှီးဘူးနော် ။ သူအဖြေတောင်းတော့ နောက်သုံးနှစ်ကြာရင်ပေးမယ်လို့ ပြောထားတယ်။ သူက မေ25 ကျရင် စာမေးပွဲဖြေရတော့မှာ။ နောက်နေ့ကျ ရင်အဖြေသိချင်တယ်တဲ့။ သူ့ကို မတွေ့တဲ့ အခါကျရင် လွမ်းသလိုလိုတော့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရည်းစားရမှာတော့ နည်းနာ်းကြောက်တယ်။
PLEASE HELP ME ! THAT'S DAY & TOMORROW!
Subject: Re: သို့....မနက်ဖြန် 19th May 2009, 10:38 pm
မင်းပြောတဲ့ အချစ်စစ်ဆိုတာ ဗေဒင်ဆရာက ပြောတာလား..မင်းက မင်းကိုရည်းစားစကားပြောတဲ့ လူရဲ့ ရင်ထဲ က
စကားကိုဗေဒင် ဆရာတွက်တာလား.....ညီမလေးကို အကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်ပါတယ်....ညီမလေးဟာ တကယ်အချစ်စစ်ကိုပဲ လိုချင်တာ တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက် ပဲ ရင်ခုန်မှု့ကို တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးချင်တာပါ
ရင်ထဲ ကလည်း တကယ်ကိုး သူမရှိရင် မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ အသိ ညီမလေးစိတ်ထဲ ၀င်လာတဲ့ အခ်ါကျရင်
ညီမလေး သူ့ကို အဖြေပေးလိုက်ပေါ့...အချိန်ဆိုတာလည်း အချစ်ကို အကောင်းဆုံး အဖြေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပဲလေ....ညီမလေးတစ်ယောက် အချစ်စစ်နဲ့ တွေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်....
လိင်(ကျား/မ) : ရေးသားချက်ပေါင်း : 61
ရမှတ်ပေါင်းမှာ : 67
မှတ်ပုံတင်သည့်နေ့ : 2010-11-15
အလုပ်အကိုင်/၀ါသနာ : စာေ၇းခြင်း/ ဘောလုံးကန်ခြင်း
Subject: Re: သို့....မနက်ဖြန် 15th November 2010, 10:42 pm
Subject: Re: သို့....မနက်ဖြန် 11th February 2011, 11:57 am
Subject: Re: သို့....မနက်ဖြန်